Golaha Wasiirada oo soo saaray 14 qodob | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Golaha Wasiirada oo soo saaray 14 qodob
Golaha Wasiirada oo soo saaray 14 qodob
In la sameeyo ciidanka howlgalka xasilinta Caasimadda, oo isugu jira Boliis, XDS & Nabadsugid, kuwaas oo leh hal Talis oo leh hoggaan mideysan.
Caasimadda Waxaa laga mamnucay ciidamada hubaysan iyo gaadiidka dagaalka ee aan ku jirin:-
Howlgallada lagu xasilinayo Caasimadda,
Aan wadanin warqad fasax dhaq-dhaqaaq ah
Ciidamada XDS ee ka qayb qaadanaya Howlgalka Xasilinta Caasimadda, waa inay ka midyihiin HORIN “Polizia-Militariya”.
Waxaa laga mamnuucay dhammaan qof kasta oo ay ku jiraan Mas’uuliyiinta Dowladda in Magaalada Muqdisho ay ku dhex wataan ilaalo ka badan 4 askari gaari kasto iyo ugu badnaan 2 gaari, Mana qaadan karaan qori ka wayn AK47.
Iyadoo la fulinaayo jiheynta & Tilmaamaha Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxay Guddiga Amniga Qaranka go’aamiyeen in Degmada Afgooye ay ka mid noqoto Howlgalka xasilinta Caasimadda.
Waxaa Taliska Ciidanka Boliiska laga doonayaa in muddo 60 casho ku eg ay ku soo dhisaan ciidamo gaar ah oo ilaaliya madaxda Qaranka iyo goobaha Muhiimka ah ee Dowladda.
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa ka howlgalaya Abaabulka & Baraarujinta dadweynaha iyagoo kaashanaya Wasaarada Warfaafinta, bulshada qaybaheeda kala duwan, iyo Hay’adaha amniga.
Wasarada Warfaafinta ee Dowladda Federaalka waxay mas’uul ka ahaan doonaa:-
Previous articleDowladda Masar oo gargaar bini aadamnimo soo gaarsiisay Soomaaliya
Next articleAkhriso: Khudbadihii ugu muhiimsanaa ee laga jeediyay shirka London